Lalao bibilava 🥇 Midira ary mankafiza amin'ny Emulator.online
Lalao bibilava: ahoana no filalaovana tsikelikely? 🙂
Milalao backgammon an-tserasera maimaimpoana araho ireto torolàlana manaraka ireto:
dingana 1 . Sokafy ny navigateur tianao ary mandehana mankamin'ny tranonkalan'ny lalao Emulator.online
dingana 2 . Raha vantany vao miditra amin'ny tranokala ianao dia efa hiseho eo amin'ny efijery ny lalao. Mila tsindrio fotsiny ianao Play ary afaka manomboka misafidy ny fanaingoana tianao indrindra ianao. Afaka misafidy amin'ny maody mahazatra sy ny maody sakana (traikefa nahafinaritra) ianao . 🙂
Dingana 4. Mba handresena ny lalao dia mila manimba ny filaharan'ireo baolina miloko ianao amin'ny alàlan'ny fanipazana miboiboika. Rehefa manambatra mitovy loko na telo na mihoatra ianao dia esorina izy ireo.
Inona ny lalao Snake? 🐍
The Lalao bibilava dia lalao ho an'ny telefaona finday, konsole video ary solosaina, izay ao ny tanjona lehibe indrindra dia ny hitarika ny lohan'ny bibilava manerana ny efijery , manandrana mihinana ny paoma izay zaraina an-tsokosoko amin'ny lalany. Mba tsy hahavery anao dia tsy maintsy mikapoka ny rindrina sy ny rambon'ny bibilava ianao.
Ny fahatsorany dia mahatonga azy io ho lalao manokana. Mila mampiasa ny zana-tsipìka eo amin'ny fitendry ianao mba hitarika ny bibilava mankany amin'ny fandresena.
Tantaran'ny lalao 🤓
Snake dia teraka tamin'ny Blockade tamin'ny Oktobra 1976 . Tamin'ny lalao tany am-piandohana dia nifampiraharaha tamina mpifaninana hafa ianao.
Ny tanjona dia ny hifandonan'ny fahavalonao aminao na ny tenany raha mbola nijoro ianao. Tsy afaka nifindra 90 degre isaky ny hetsika ianao ary noho izany dia nanana ny bokotra fitodiana mahazatra ianao.
Ao amin'ny kinova malaza indrindra an'ny Snake Game, ny variant mihevitra ary izay fahavalontsika dia ny tenantsika, satria isika afaka mifanipaka amin'ny ampahany rehetra amintsika raha tsy mitandrina isika.
Maromaro ny andiam-pikatsoana sy bibilava tao. Atari dia namorona kinova roa ho an'ny Atari 2600, Dominos ary Nanodidina . Ho an'ny ampahany, antsoina hoe kinova kankana dia nalamina ho an'ny Solosaina Commodore sy Apple II .
Ary tamin'ny 1982 dia lalao mitondra ny lohanteny Navoaka i Nibbler , starring bibilava amin'ny toerana mampahatsiahy ny labyrintan'i Pac-Man (1980).
Variant, Nibbles (1991) dia nalefa niaraka tamin'ny MS-DOS ho toy ny programa santionany QBasic. Ary tamin'ny 1992, dia nisy kinova iray nantsoina Hazakazaka Rattler dia tafiditra tao amin'ny Microsoft Entertainment Pack faharoa, fanangonana lalao, ny sasany izay natsofoka tao amin'ny kinova Windows nifandimby, toa ny Minesweeper na FreeCell.
Tamin'ity resume ity dia tsy nahagaga raha Nokia miloka amin'ny Blockade / Snake / Nibbler toy ny toerana misy anao lalao ho an'ny telefaona Nokia. Tsotra sy mampiankin-doha ny dinamika, nahafinaritra, ary mahitsy ny fepetra takian'ny teknika.
Karazana lalao bibilava ️
Snake Game dia kilalao lalao finday sy solosaina amin'izao fotoana izao, noho izany dia tsy tokony hahagaga antsika ny mahita azy variants marobe amin'ity lalao ity . Ny antony itohizany miovaova dia ny heriny mampihetsi-po sy ny fahatsorany rehefa milalao, ary tsy misy antony hafa hanohizana mampiditra azy io eny an-tsena.
Miaraka amin'izany rehetra izany, ny lalao noforonina tamin'ny taona 70 dia tsy hadino, ary anarana vitsivitsy monja amin'ny Lalao Snake no hotononintsika.
Izany no Bibilava tany am-boalohany navadika ho an'ny Nokia S60. Ity no kinova izay resahina rehefa nilaza izahay fa nilalao Snake Game tamin'ny finday.
Bibilava Ilay menarana voalohany . Io ilay Snake mifanaraka amin'ny telefaona iPhone. Amin'ity kinova ity dia tian'izy ireo ny hanome azy ny mijery varotra izany dia tamin'ny finday voalohany.
TiltSnake . Ampiasao ny accelerometer.
Mobile Snake. Bibilava mahazatra ho an'ny iPhone sy iPod touch.
GeoSnake. Ity kinova ity dia manana fiasa vaovao tsy mitovy amin'ny fahita matetika, ary izany dia manana fampiasa vaovao ianao sari-tany samy hafa.
Snake The Original. Mitazona ny sarin'ireo finday taloha ho mahatoky azo atao.
Ary na ny console malaza indrindra aza, miaraka amin'ny sary sy ny endri-javatra tsy mitovy amin'ny taona 90, dia tsy afaka nanohitra mamoaka ny kinalan'izy ireo amin'ny lalao Snake . Izy rehetra dia samy nampiditra zava-baovao tao amin'ny kinova vaovao, saingy mitazona ny maha-izy azy ireo ny Snake Game. Anisan'izany ny PSP, Play Station 3, WII, Nintendo DS ary Xbox 360.
Voatana tokoa ny bibilava tsotra na hita maso ary amin'ny resaka gameplay. Ny fifantohana dia ny bibilava izay azon'ny mpilalao tarihina lalana efatra: havia, havanana, ambony sy ambany .
Ireo teboka (Paoma) miseho tampoka eo amin'ny efijery ary tsy maintsy samborina amin'ny lohany ny bibilava. Isaky ny lany pixel dia tsy mitombo ny isa azon'ny mpilalao, fa koa ny halavan'ny filaharana iray tarika iray.
Noho izany, ny habaka eo amin'ny efijery dia miha-kely kokoa, ary izany dia mampitombo ny haavon'ny fahasahiranana hatrany. Tapitra ny lalao raha mikasika ny sisin'ny kianja filalaovana na ny vatanao ny bibilava.
Toy ny kilasika arcade maro, Snake dia natolotra tamin'ny karazany maro ho lalao flash internet nandritra ny taona maro. Miankina amin'ny karazany, apetraka ny sakana fanampiny amin'ny lalan'ny mpilalao hampitombo ny haavon'ny fahasahiranana.
Mba hahafahana manome isa isa avo kokoa, isa bonus nampiana amin'ny kinova sasany.
Ny zavatra mahatsikaiky momba ny lalao dia ny asany tsotra, ary toa tsy ilaina ny filazan'izy ireo amintsika ny tetika rehetra hialana amin'ny fianjerana. Amin'ny faran'ny andro dia manana ny efijery iray manontolo hihodina tsy misy farany isika. Fa ny zavatra mitovy foana no mitranga amintsika, mamandrika ny tenantsika ao anatiny isika ny an'ny bibilava vatana tsy misy fomba hivoahana any.
Aza manantena ny tetika fiainana tsy manam-petra na ny fomba hahatonga ny sombin'ny bibilava hanjavona amin'ny fomba mahagaga, tsia. Ireto misy sasany torohevitra tsotra tokony hotadidina raha tiantsika hitombo ny bibilantsika fa tsy ho voafandrika ao anatiny.
Amin'ny voalohany dia mora be ny mihetsika manodidina ny efijery miaraka amin'ny dikany zigzags satria manana toerana malalaka be isika, saingy misy fotoana tsy azo atao izany noho ny haben'ny bibilava misy antsika.
Eto izahay dia manoro hevitra anao hanomboka hatrany ahodino ny menarana avy ao anatiny mankany ivelany , amin'ity fomba ity dia hialanao ny famelana ny loha voafatotra eo anelanelan'ny vatana.
Ity no iraka lehibe ataon'ny bibilava, tsy maintsy mihinana paoma izy mba hitombo. Ity misy lesoka mahazatra iray hafa, ary izany no izy tsy tokony hanantona azy ireo mivantana ianao tsy mitadidy ny torohevitra voalohany. Ataovy voafehy foana ny vatan'ny bibilava, satria raha tsy izany dia azo inoana fa hiafara amin'ny fifandonana amin'ny ampahany amin'ny rambony ianao.
Raha ilaina, zipo ny paoma mandra-pahazoanao antoka fa voafehinao ny bibilonao manontolo.
Fantatrao ve ity lalao ity? Manantena izahay fa satria manana ny tantaran'ity lalao ity sy ny fomba filalaovana azy ianao dia ho hitanao ny fomba mampientam-po Mety ho.
Azonao atao eto ity lalao ity ary eto ihany koa maimaim-poana, noho izany tsy misy fialan-tsiny hanombohana milalao sy handany ora voafatotra amin'ny efijery.
Ho ela velona ny lalao finday!